IVicarage eGuqulwe ngokuthandekayo kufutshane neevenkile zeencwadi kunye neeGalari
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguStefano
Ngena kwisango lentsimbi phantsi kwearchway yamatye kwaye ujonge igadi eyimfihlo kunye nezolileyo kumbindi weMonti. Indlu inyakazela ngonobumba bokuqala kwiibhodi zayo eziphantsi, izitena, kunye neesilingi ezenziwe ngamaplanga. Hlaziya kumagumbi okuhlambela anamhlanje.
Ibhedi elala umntu omnye, Igumbi lokuhlambela elisegumbini lokulala
4.72 (iingxelo zokuhlola 72)
Indlu ikufuphi neLondon Fields, ipaki yoluntu ephilayo, eyilwe kakuhle enethafa lentyatyambo yasendle. Kukuhamba umgama ukuya kwiMarike yeBroadway yeevenkile zokutyela, iivenkile zeencwadi, iibhari, kunye neegrosari. Kufuphi iWilton Way ineevenkile, ii-pubs, kunye neendawo zokutyela eziphumelele ibhaso.
imizuzu eyi-64 ngemoto xa indlela ingaxakekanga
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R4217